ချစ်သူတွေကြား တဂျိန်းဂျိန်းရန်ဖြစ်နေမယ့်အစား ဒါလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါလား
5 May 2017 . 6:24 PM
လူတွေဆိုတာ အရွယ်လေးရောက်တာနဲ့ အမြီးလေးပေါက်ချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ အချစ်ဆိုတာ မီးလိုပဲ၊ ပူတတ်လောင်တတ်တယ်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဖွဲ့ဖွဲ့ အဲဒီမီးလေးကိုမှ ဘယ်လောက် ပူလှချည်ရဲ့လို့ သွားကိုင်ချင်ကြတဲ့ သူတွေချည်းပဲ။ အပူတွေ ရှာပြီးမှ တကယ့်အပူနဲ့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ဖြစ်တော့ “အို..ဘယ်လိုတွေ ခံစားရတာ၊ ဘယ်လိုတွေ အသည်းကွဲရတာ၊ သူက မကောင်းဘူးဟာ၊ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးက ဘယ်လိုဗျာ” နဲ့ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်ကြရော။ တကယ်တော့ ချစ်တယ်ဆိုတာ ပြောရုံက အရမ်းလွယ်ပါတယ်၊ သူချစ် ကိုယ်ချစ် ဖြစ်လို့ ရည်းစားဖြစ်သွားကြတဲ့ အခါ နားလည်မှုတည်ဆောက်ရတာသာ ခက်တာပါ။ သတိချပ်ရမှာက ချစ်သူဆိုတာ “ဆိုင်ပဲဆိုင်၊ မပိုင်တဲ့ ပန်း”ဆိုတာပါပဲ။ သူ့စည်းကိုယ်စည်းလေး ထားပြီး ချစ်တတ်ရင် သာယာတဲ့ ချစ်သူဘဝလေးရရှိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ချစ်တတ်ခြင်းအနုပညာပေါ့ဗျာ။ ငါတို့တွေ အဆင်မပြေဘူးဟယ်လို့ ဘေးလူတွေကို ညည်းနေမယ့်အစား လက်တွေ့ကျကျ ချစ်သူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြား ထားသင့်တဲ့ ခုလို အရာလေးတွေကို လိုက်နာကြည့်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ။
၁။ “မရခင် ဖျာလိုလိပ် ထိပ်ပေါ်တင်၊ ရတော့ ဖျာလိုခင်းပြီး နင်းချေ”ဆိုတဲ့ အကွက်တွေ မလုပ်ပါနဲ့။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ လူတိုင်း ချစ်စ၊ ခင်စ၊ ကြင်နာစမှာ Love Birds လေးတွေလို ပလူးပလဲ သရဲအမဲသားကျွေးမိသလို ချစ်ပြ ခင်ပြ ကြင်နာပြကြပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့ အခါမှာတော့ ကြာရှည်မပလူးနိုင်တော့တဲ့ အခါမှာ “နင်က င့ါကို အရင်လို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး၊ မင်းက အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူးနော်”နဲ့ ပြစ်တင်ငြိုငြင် အက်ကြောင်းတွေ ထလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါမျိုး မဖြစ်ရအောင် စကြိုက်တည်းက ဒီကောင်မလေးရရင်ပြီးရော အလွန်အကျွံ အိုဗာတင်းတွေ ဖျော်ပြီး ဂရုစိုက်မပြပါနဲ့။ ချစ်တာ ချစ်ပေမယ့် ကိုယ့်အရှိအတိုင်း၊ ကိုယ့်ပုံစံလေးအတိုင်းပဲ သွားပါ။ ဂရုတွေ အလွန်အကျွံစိုက်၊ ကြင်နာပြီးမှ ရေရှည်မလုပ်နိုင်တဲ့ အခါ ပြဿနာတွေ တက်လာနိုင်ပါတယ်။ မုန့်ဝယ်ကျွေးနေကျ ကလေးကို မကျွေးတော့တဲ့ အခါ ငိုကြသလိုမျိုးပေါ့ဗျာ။
၂။ ရည်းစားတွေ ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုက အလိုက်မသိတာကြောင့်ပါ။
အလိုက်မသိတာ၊ အရိပ်သုံးပါးနားမလည်တာတော့ ဘယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာမှ မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်ကောင်လေး၊ ကိုယ့်ကောင်မလေးအပေါ်ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးတာပေ့ါဗျာ။ အလိုက်မသိတဲ့အထဲ အများကြီးပါပါတယ်၊ ပိုက်ဆံမရှိပါဘူးဆိုမှ မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းတာ၊ ခိုခို ဟိုဟာလေး ဝယ်ပေးနော် ဒီဟာလေး ဝယ်ပေးနော် ပူဆာတာ 😛 ၊ ဒါမျိုးဟာ လက်ထဲ ရေလျှံနေတတ်တဲ့ အချိန်တော့ ချစ်လေးသဘောလုပ်တတ်ပေမယ့် မရှိတဲ့ အချိန်ကျရင်တော့ ငြိုငြင်စရာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အိမ်က ထွက်လို့ မရပါဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို Night Out ထွက်ဖို့ချည်း လှိမ့်ခေါ်တာမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်၊ ဒါဟာ သူ့အတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရသလို ခင်ဗျားလည်း အငြင်းခံရပါများရင် တင်းလာပါလိမ့်မယ်၊ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ ကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ အလိုက်မသိ ခေါ်မနေဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေး သွားကဲပါလေ ကိုယ့်လူတို့။ ဒီတော့ အလိုက်သိပါ၊ကြင်နာပါ၊ ချက်ဆို နားခွက် မီးတောက်ကြပါ။ ဒါဆို ရည်းစားသနာကိစ္စမှ မဟုတ် အခြားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်း အိုကေမှာ စိုပြေလာပါလိမ့်မယ်။
၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်ထည့်တွက်တတ်တာတွေ၊ ဘေးစကားတွေကို နားယောင်တတ်တာတွေ စွန့်လွှတ်ကြည့်ပါ။
လူနှစ်ယောက်ရည်းစားဖြစ်ပြီဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးလို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ၊ ကိုယ်တွေကို လှော်ပေးတဲ့ သူတွေက ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံတွေဆိုရင် မပါမဖြစ် ဗီလိန်တွေ၊ လူကြမ်းတွေ အဖြစ် စနှိုက်ကြော်တွေ၊ကြာကူလီတွေ၊ အဖျက်သမားတွေလည်း တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍပါလာကြမယ်ဆိုတာ မေ့မထားကြပါနဲ့။ နင့်ဘဲက ဘယ်လိုလေ၊ မင်းစော်က ဘယ်ညာပြောလာရင် အဲ့ဒါတွေ လိုက်ဖီးလ်ပြီး ငုတ်တုတ်ခံမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ ဒဲ့မေးပါ။ ဒီလိုပြောလို့ ဘေးလူတွေ ပြောတာ နားနှစ်ဘက်ပိတ် တွင်တွင်ငြင်းပြီး ကိုယ့်ချစ်သူပြောသမျှ မျက်စိစုံကန်းပြီး ယုံခိုင်းနေတာ မဟုတ်ရဘူးရယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်သွားရင် သူမဟုတ်တာ လုပ်နေလား၊ မလုပ်နေဘူးလားဆိုတဲ့ အာရုံသိလေး ရလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ့်အာရုံသိလေးရယ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူ နှုတ်ထွက်စကားရယ်၊ မြေပြင်အခြေအနေလေးရယ် ပေါင်းပြီး ချင့်ချိန်ယုံကြ၊ ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ပါ။ သို့မဟုတ်ဘဲ ဘေးလူက ဘာလေးပြောလိုက် ပြောလိုက် သူ့သွားသွားပြီးရစ် နောင်ဂျိန်ချနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Relationship တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၄။ ရည်းစားဟောင်းတွေကိစ္စ သေချာကိုင်တွယ်ပါ။ (သေချာနော်..သေချာ)
ရည်းစားအတော်များများဟာ မကြိုက်ခင် ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတိုင်ပင်ရင်း ပြောရင်း ကြိုက်သွားကြတာများပါတယ်။ ဒါဟာ နောက်တစ်ချိန်မှာ Shock ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးက သဝန်တိုတတ်သူဆိုရင် ကိုယ်ရင်ဖွင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရင်ဖွင့်ထားတာတွေဟာ ထောက်ကွက်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ 😛
မကြိုက်ခင်တည်းကလည်း ကိုယ်ဟာ သူ့ရည်းစားဟောင်းနေရာမှာ အစားထိုးခံရတဲ့သူလား သိအောင်လုပ်ပါ။ အစားထိုးခံရတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမှာ မဆန်းပါဘူး၊ ဒါဆိုရင်တော့ ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ ခင်ဗျားအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတော့
အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ တကယ်ချစ်လို့ တွဲကြပြီဆိုရင်တော့ ရည်းစားဟောင်းကိစ္စကို သေချာရှင်းထားပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူက ရည်းစားဟောင်းတွေနဲ့လည်း ပြန်ခင်ခင်မင်မင်ရှိတတ်တဲ့ သူမျိုးဆိုရင်တော့ ဘယ်အတိုင်းအတာထိတော့ ကိုယ်လက်ခံနိုင်တယ်၊ ဘယ်အရာကတော့ ဘောင်မဝင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြောပြထားပါ။ မကြိုက်ခင်တည်းက ညှိနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်၊ မီးကို မလောင်ခင်က တားတာက လောင်နေတုန်း ငြိမ်းသတ်ရတာထက် ပိုလွယ်တယ်မလား။
၅။ ကိုယ်ပိုင်နေရာလေး (Personal Space) တစ်ခု ထားပေးပါ။
လူတွေဟာ ချစ်လာပြီ၊ ချစ်သူဖြစ်သွားကြပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ကို ချွန်းအုပ်အုပ် ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကြီးလို သဘောထားမိလာကြတော့တာပါပဲ။ ဒီတော့ အမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းပေးရမှာက သူဟာ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်နှင့်ဆိုင်သာ ဆိုင်တာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အရာ မဟုတ်ရကြောင်းပေါ။ ဒီလို ခေါင်းထဲ ထည့်ထားတာဟာ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ခင်ဗျားအတွက်လည်း သက်သာစေပါတယ်။
Personal Space ပေးရာမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့ရဲ့ ဖုန်းတွေ ယူကြည့်တာ၊ သူ့ရဲ့ Social Media Account တွေ ဝင်ကြည့်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ စိတ်မချတာတော့ စိတ်မချဘူးပေါ့လေ။ ဒီလိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ မဟုတ်တာ လုပ်ထားတာ တစ်ခုခုတွေ့ပြီး ရန်ဖြစ်ကြ၊ သူ့ကို တားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ သူက Social Media မကလို့ ဘာကြီးကို လိုက်ပိတ်ပိတ် ထင်ရာစိုင်းမှာပါပဲ။အဲဒီလို လုပ်နေတဲ့ သူမဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကိုယ်အပေါ်ကောင်းမွန်တဲ့ သူဆိုရင် ဒါမျိုးတွေ လုပ်ခြင်းဟာ စိတ်ပျက်စရာတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်ဖြစ်ရင်လည်း သူ့ဘက်က တစ်ယောက်တည်း နေချင်တယ်ပြောတဲ့အခါ ဖုန်းကို တစ်သိန်းနဲ့ ၁၈ခါခေါ်နေတာမျိုး၊ အတင်းလိုက်ရှာပြီး တွေ့တာမျိုးထက် ခဏငြိမ်နေပေးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ လူဟာ တကယ်ပဲ တစ်ခါတလေမှာ ဘာမှ မလုပ်၊ ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့ဘဲ တစ်ကိုယ်ရည်နေချင်တဲ့ အချိန်မျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ အချိန်တန်ရင် သူ့ဘာသာသူ ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသာ မှတ်ပြီး ခဏလွှတ်ထားပေးလိုက်ပါဦးပေါ့။
ကဲ! အခရာပရိသတ် Love Birds လေးတွေကနေ Angry Birds တွေဖြစ်ပြီး ရန်မစောင်ရလေအောင် အပေါ်က အချက်လေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားလေးတွေကို နားလည်မှုပေးပြီး တူနှစ်ကိုယ်ဖြောင့်ဖြူးတဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းကို လျှောက်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
ခဈြသူတှကွေား တဂြိနျးဂြိနျးရနျဖွဈနမေယျ့အစား ဒါလေးတှေ လုပျကွညျ့ပါလား
လူတှဆေိုတာ အရှယျလေးရောကျတာနဲ့ အမွီးလေးပေါကျခငျြကွတာ သဘာဝပါပဲ။ အခဈြဆိုတာ မီးလိုပဲ၊ ပူတတျလောငျတတျတယျလို့ ဘယျလောကျပဲ ဖှဲ့ဖှဲ့ အဲဒီမီးလေးကိုမှ ဘယျလောကျ ပူလှခညျြရဲ့လို့ သှားကိုငျခငျြကွတဲ့ သူတှခေညျြးပဲ။ အပူတှေ ရှာပွီးမှ တကယျ့အပူနဲ့ နဖူးတှေ့ ဒူးတှေ့ ဖွဈတော့ “အို..ဘယျလိုတှေ ခံစားရတာ၊ ဘယျလိုတှေ အသညျးကှဲရတာ၊ သူက မကောငျးဘူးဟာ၊ ကြှနျတေျာ့ကောငျမလေးက ဘယျလိုဗြာ” နဲ့ အရူးမီးဝိုငျးဖွဈကွရော။ တကယျတော့ ခဈြတယျဆိုတာ ပွောရုံက အရမျးလှယျပါတယျ၊ သူခဈြ ကိုယျခဈြ ဖွဈလို့ ရညျးစားဖွဈသှားကွတဲ့ အခါ နားလညျမှုတညျဆောကျရတာသာ ခကျတာပါ။ သတိခပျြရမှာက ခဈြသူဆိုတာ “ဆိုငျပဲဆိုငျ၊ မပိုငျတဲ့ ပနျး”ဆိုတာပါပဲ။ သူ့စညျးကိုယျစညျးလေး ထားပွီး ခဈြတတျရငျ သာယာတဲ့ ခဈြသူဘဝလေးရရှိမှာ အမှနျပါပဲ။ ခဈြတတျခွငျးအနုပညာပေါ့ဗြာ။ ငါတို့တှေ အဆငျမပွဘေူးဟယျလို့ ဘေးလူတှကေို ညညျးနမေယျ့အစား လကျတှကေ့ကြ ခဈြသူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကွား ထားသငျ့တဲ့ ခုလို အရာလေးတှကေို လိုကျနာကွညျ့မယျဆိုရငျ ပိုပွီး စိတျခမျြးသာရမှာပါ။
၁။ “မရခငျ ဖြာလိုလိပျ ထိပျပျေါတငျ၊ ရတော့ ဖြာလိုခငျးပွီး နငျးခြေ”ဆိုတဲ့ အကှကျတှေ မလုပျပါနဲ့။
ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ လူတိုငျး ခဈြစ၊ ခငျစ၊ ကွငျနာစမှာ Love Birds လေးတှလေို ပလူးပလဲ သရဲအမဲသားကြှေးမိသလို ခဈြပွ ခငျပွ ကွငျနာပွကွပါတယျ။ အခြိနျတဈခုကွာလာတဲ့ အခါမှာတော့ ကွာရှညျမပလူးနိုငျတော့တဲ့ အခါမှာ “နငျက င့ါကို အရငျလို ဂရုမစိုကျတော့ဘူး၊ မငျးက အရငျလို မဟုတျတော့ဘူးနျော”နဲ့ ပွဈတငျငွိုငွငျ အကျကွောငျးတှေ ထလာတတျကွပါတယျ။ ဒါမြိုး မဖွဈရအောငျ စကွိုကျတညျးက ဒီကောငျမလေးရရငျပွီးရော အလှနျအကြှံ အိုဗာတငျးတှေ ဖြျောပွီး ဂရုစိုကျမပွပါနဲ့။ ခဈြတာ ခဈြပမေယျ့ ကိုယျ့အရှိအတိုငျး၊ ကိုယျ့ပုံစံလေးအတိုငျးပဲ သှားပါ။ ဂရုတှေ အလှနျအကြှံစိုကျ၊ ကွငျနာပွီးမှ ရရှေညျမလုပျနိုငျတဲ့ အခါ ပွဿနာတှေ တကျလာနိုငျပါတယျ။ မုနျ့ဝယျကြှေးနကြေ ကလေးကို မကြှေးတော့တဲ့ အခါ ငိုကွသလိုမြိုးပေါ့ဗြာ။
၂။ ရညျးစားတှေ ပွဿနာဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲက တဈခုက အလိုကျမသိတာကွောငျ့ပါ။
အလိုကျမသိတာ၊ အရိပျသုံးပါးနားမလညျတာတော့ ဘယျလူမှုဆကျဆံရေးမှာမှ မကောငျးပါဘူး။ ကိုယျ့ကောငျလေး၊ ကိုယျ့ကောငျမလေးအပျေါဆိုရငျတော့ ပိုဆိုးတာပေ့ါဗြာ။ အလိုကျမသိတဲ့အထဲ အမြားကွီးပါပါတယျ၊ ပိုကျဆံမရှိပါဘူးဆိုမှ မုနျ့ဝယျကြှေးခိုငျးတာ၊ ခိုခို ဟိုဟာလေး ဝယျပေးနျော ဒီဟာလေး ဝယျပေးနျော ပူဆာတာ 😛 ၊ ဒါမြိုးဟာ လကျထဲ ရလြှေံနတေတျတဲ့ အခြိနျတော့ ခဈြလေးသဘောလုပျတတျပမေယျ့ မရှိတဲ့ အခြိနျကရြငျတော့ ငွိုငွငျစရာဖွဈလာတတျပါတယျ။ အိမျက ထှကျလို့ မရပါဘူးဆိုတဲ့ ကောငျမလေးကို Night Out ထှကျဖို့ခညျြး လှိမျ့ချေါတာမြိုးလညျး ရှိပါသေးတယျ၊ ဒါဟာ သူ့အတှကျလညျး စိတျရှုပျရသလို ခငျဗြားလညျး အငွငျးခံရပါမြားရငျ တငျးလာပါလိမျ့မယျ၊ ဒီလိုမြိုးအခွအေနနေဲ့ ကွုံလာပွီဆိုရငျတော့ အလိုကျမသိ ချေါမနဘေဲ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျသာ လှတျလှတျလပျလပျလေး သှားကဲပါလေ ကိုယျ့လူတို့။ ဒီတော့ အလိုကျသိပါ၊ကွငျနာပါ၊ ခကျြဆို နားခှကျ မီးတောကျကွပါ။ ဒါဆို ရညျးစားသနာကိစ်စမှ မဟုတျ အခွားပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးတှမှောလညျး အိုကမှော စိုပွလောပါလိမျ့မယျ။
၃။ ပတျဝနျးကငျြကို သိပျထညျ့တှကျတတျတာတှေ၊ ဘေးစကားတှကေို နားယောငျတတျတာတှေ စှနျ့လှတျကွညျ့ပါ။
လူနှဈယောကျရညျးစားဖွဈပွီဆို ကိုယျ့ကိုယျကို မငျးသားနဲ့ မငျးသမီးလို့ မွငျယောငျကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြးကောငျးတှေ၊ ကိုယျတှကေို လှျောပေးတဲ့ သူတှကေ ဇာတျပို့ ဇာတျရံတှဆေိုရငျ မပါမဖွဈ ဗီလိနျတှေ၊ လူကွမျးတှေ အဖွဈ စနှိုကျကွျောတှေ၊ကွာကူလီတှေ၊ အဖကျြသမားတှလေညျး တဈခနျးတဈကဏ်ဍပါလာကွမယျဆိုတာ မမေ့ထားကွပါနဲ့။ နငျ့ဘဲက ဘယျလိုလေ၊ မငျးစျောက ဘယျညာပွောလာရငျ အဲ့ဒါတှေ လိုကျဖီးလျပွီး ငုတျတုတျခံမနပေါနဲ့။ ကိုယျ့ခဈြသူရညျးစားကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသာ ဒဲ့မေးပါ။ ဒီလိုပွောလို့ ဘေးလူတှေ ပွောတာ နားနှဈဘကျပိတျ တှငျတှငျငွငျးပွီး ကိုယျ့ခဈြသူပွောသမြှ မကျြစိစုံကနျးပွီး ယုံခိုငျးနတော မဟုတျရဘူးရယျ။ လူတဈယောကျကို ခဈြသှားရငျ သူမဟုတျတာ လုပျနလေား၊ မလုပျနဘေူးလားဆိုတဲ့ အာရုံသိလေး ရလာတတျပါတယျ။ အဲဒီလို ကိုယျ့အာရုံသိလေးရယျ၊ ကိုယျ့ခဈြသူ နှုတျထှကျစကားရယျ၊ မွပွေငျအခွအေနလေေးရယျ ပေါငျးပွီး ခငျြ့ခြိနျယုံကွ၊ ဆုံးဖွတျကွဖို့ပါ။ သို့မဟုတျဘဲ ဘေးလူက ဘာလေးပွောလိုကျ ပွောလိုကျ သူ့သှားသှားပွီးရဈ နောငျဂြိနျခနြကွေမယျဆိုရငျတော့ ဘယျလိုမှ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ Relationship တဈခု ဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။
၄။ ရညျးစားဟောငျးတှကေိစ်စ သခြောကိုငျတှယျပါ။ (သခြောနျော..သခြော)
ရညျးစားအတျောမြားမြားဟာ မကွိုကျခငျ ရညျးစားဟောငျးအကွောငျးတိုငျပငျရငျး ပွောရငျး ကွိုကျသှားကွတာမြားပါတယျ။ ဒါဟာ နောကျတဈခြိနျမှာ Shock ရှိလာတတျပါတယျ။ ကိုယျကွိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေးက သဝနျတိုတတျသူဆိုရငျ ကိုယျရငျဖှငျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ ရငျဖှငျ့ထားတာတှဟော ထောကျကှကျတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ 😛
မကွိုကျခငျတညျးကလညျး ကိုယျဟာ သူ့ရညျးစားဟောငျးနရောမှာ အစားထိုးခံရတဲ့သူလား သိအောငျလုပျပါ။ အစားထိုးခံရတယျဆိုရငျတော့ ဒီလို ပွဿနာတှေ ဖွဈလာမှာ မဆနျးပါဘူး၊ ဒါဆိုရငျတော့ ဘာဆကျလုပျမလဲဆိုတာ ခငျဗြားအပျေါမှာပဲ မူတညျပါတော့
အဲဒီလို မဟုတျဘဲ တကယျခဈြလို့ တှဲကွပွီဆိုရငျတော့ ရညျးစားဟောငျးကိစ်စကို သခြောရှငျးထားပါ။ ကိုယျ့ခဈြသူက ရညျးစားဟောငျးတှနေဲ့လညျး ပွနျခငျခငျမငျမငျရှိတတျတဲ့ သူမြိုးဆိုရငျတော့ ဘယျအတိုငျးအတာထိတော့ ကိုယျလကျခံနိုငျတယျ၊ ဘယျအရာကတော့ ဘောငျမဝငျဘူးဆိုတာ သခြောပွောပွထားပါ။ မကွိုကျခငျတညျးက ညှိနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ၊ မီးကို မလောငျခငျက တားတာက လောငျနတေုနျး ငွိမျးသတျရတာထကျ ပိုလှယျတယျမလား။
၅။ ကိုယျပိုငျနရောလေး (Personal Space) တဈခု ထားပေးပါ။
လူတှဟော ခဈြလာပွီ၊ ခဈြသူဖွဈသှားကွပွီဆိုရငျ ဘယျလောကျပဲ စိတျကို ခြှနျးအုပျအုပျ ကိုယျ့ခဈြသူကို ကိုယျပိုငျပစ်စညျးကွီးလို သဘောထားမိလာကွတော့တာပါပဲ။ ဒီတော့ အမွဲမပွတျနှလုံးသှငျးပေးရမှာက သူဟာ လူသားတဈယောကျဖွဈကွောငျး၊ ကိုယျနှငျ့ဆိုငျသာ ဆိုငျတာ ဖွဈပွီး ကိုယျပိုငျတဲ့ အရာ မဟုတျရကွောငျးပေါ။ ဒီလို ခေါငျးထဲ ထညျ့ထားတာဟာ တဈခုခုဖွဈလာရငျ ခငျဗြားအတှကျလညျး သကျသာစပေါတယျ။
Personal Space ပေးရာမှာ ဖွဈနိုငျရငျ သူ့ရဲ့ ဖုနျးတှေ ယူကွညျ့တာ၊ သူ့ရဲ့ Social Media Account တှေ ဝငျကွညျ့တာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ စိတျမခတြာတော့ စိတျမခဘြူးပေါ့လေ။ ဒီလိုဝငျကွညျ့လိုကျလို့ မဟုတျတာ လုပျထားတာ တဈခုခုတှပွေီ့း ရနျဖွဈကွ၊ သူ့ကို တားလိုကျနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ တကယျလုပျခငျြတဲ့ သူက Social Media မကလို့ ဘာကွီးကို လိုကျပိတျပိတျ ထငျရာစိုငျးမှာပါပဲ။အဲဒီလို လုပျနတေဲ့ သူမဟုတျဘဲ တကယျ့ကိုယျအပျေါကောငျးမှနျတဲ့ သူဆိုရငျ ဒါမြိုးတှေ လုပျခွငျးဟာ စိတျပကျြစရာတှေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ဒါ့အပွငျ ရနျဖွဈရငျလညျး သူ့ဘကျက တဈယောကျတညျး နခေငျြတယျပွောတဲ့အခါ ဖုနျးကို တဈသိနျးနဲ့ ၁၈ခါချေါနတောမြိုး၊ အတငျးလိုကျရှာပွီး တှတေ့ာမြိုးထကျ ခဏငွိမျနပေေးလိုကျတာ ကောငျးပါတယျ။ လူဟာ တကယျပဲ တဈခါတလမှော ဘာမှ မလုပျ၊ ဘယျသူနဲ့မှ မတှဘေဲ့ တဈကိုယျရညျနခေငျြတဲ့ အခြိနျမြိုးတှေ ရှိတယျဆိုတာ အမှနျပါပဲ။ အခြိနျတနျရငျ သူ့ဘာသာသူ ပွနျကောငျးသှားပါလိမျ့မယျဆိုတာသာ မှတျပွီး ခဏလှတျထားပေးလိုကျပါဦးပေါ့။
ကဲ! အခရာပရိသတျ Love Birds လေးတှကေနေ Angry Birds တှဖွေဈပွီး ရနျမစောငျရလအေောငျ အပျေါက အခကျြလေးတှနေဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူရညျးစားလေးတှကေို နားလညျမှုပေးပွီး တူနှဈကိုယျဖွောငျ့ဖွူးတဲ့ ခဈြခရီးလမျးကို လြှောကျနိုငျပါစကွေောငျး ဆန်ဒပွုလိုကျပါတယျ။